Where to find the Best color vision Test? - 💡💻 Iris - Software for Eye fiarovana, Fahasalamana sy Famokarana 🛌👀
Maro amin'ireo olona mitady fahafahana mba hitsapana ny fahitana loko eo amin'ny tambajotra.
Unluckily Tsy maro loko fahajambana nanatitra fitiliana an-tserasera.
Fa mbola, misy vohikala amin'ny aterineto, izay mitarika ny fahitana loko fitsapana an-tserasera.
Na izany aza, raha te-hahazo ny marina sy ny toe-marina dia tsara izany fomba mba hitsidika ny sasany dokotera manokana.
Ny loko indray mipi feno fitsapana dia zava-dehibe ny hanatanteraka raha manana fahatsapana fa misy zavatra tsy mety.
Ireo fitsapana hafa izay natao mba hamantarana ny olana tanteraka. Ny sasany amin'izy ireo dia toy izao manaraka izao:
Ishihara 38 Test takelaka
Color Fandaharana Test
Io fitsapana no iray amin'ny malaza indrindra fahitana loko fitiliana. Izany dia mifototra amin'ny 88 mena takelaka.
matetika, ny fitsapana dia mampiseho amin'ilay olona efa-jazakely ny antontan- 22 mifangaro miloko takelaka.
Rehetra ny olona iray mila atao dia mba hametraka ny takelaka efatra andalana ao amin'ny marina mba. Izay ihany.
The Ishihara 38 fitsapana amin 'ny takelaka izay matetika antsoina hoe ireo takela-Ishihara nampiditra ny Dr. Shinobu Ishihara avy any Japana ela be lasa izay.
Hatramin'ny dia fitsapana ity no tena malaza indrindra rehetra manerana izao tontolo izao.
Ny vilia Ishihara fitsapana dia ahitana ny 38 pseudoisochromatic samy hafa takelaka.
Vilia tsirairay manafina ny tsipika na maro loko samihafa ao ambadiky ny teboka. Izany no iray amin'ireo fomba mora indrindra sy tsotra indrindra, raha mijery ianao fa na mijaly amin'ny karazana loko mena-maitso fahajambana na tsia.
Ny RGB Anomaloscope fizahan-toetra dia tsotra ampiasaina mba hamantarana loko mena-maitso fahampiana.
Ao amin'io fisedrana, ny olona fotsiny mila mifanaraka loko ankavia ho amin'ny marina iray amin'ny fampiasana ny Slider ambanin'ny fitoeran-javatra.
Raha toa ny olona iray dia afaka mitovy maromaro tamin'izy ireo dia midika izany fa izy ireo antoka mena-maitso colorblind.
Ny loko fitsapana fifanarahana no tena fahita karazana fitsapana natao mba hahitana ny tsy fahampiana amin'ny colorblindness.
Ao amin'io fisedrana, the person simply needs to arrange all the given colors in the correct order of colors.
Raha sendra Raha misy olona no mijaly amin'ny karazana loko fahajambana, Avy eo izy / izy no handamina ny loko tena fomba hafa raha ampitahaina amin 'ny olona miaraka amin'ny fitsipika fahitana loko.
Noho ny fampiasana ny loko fandaharana fitsapana, iray ihany no afaka tsy afaka hijery ny karazana loko ny fahitana fahampiana fa koa ny herisetra.
Mampalahelo fa vokatry ny fitsapana dia tsy azo antoka tanteraka, izay nihemotra matetika lehilahy iray tena ratsy ho an'ny isan-karazany amin'ny aterineto fahitana loko fitiliana.
Na izany aza ny vokany dia ho avo sy tsara kalitao famantarana iray ny marina fahitana loko aptitude, indrindra fa raha maka izany ho eny ambanin'ny toe-javatra tsy mahazatra.
Raha toa ianao ka efa voan'ny colorblindness azonao ampiasaina Vision mba jereo tsara ny loko.
Ataovy azo antoka fa hizaha toetra ny tenanao, raha Hianao no colorblind na tsia amin 'ny fahitan loko fahajambana fitsapana.